सत्ता समीकरणका खेल : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार सत्ता समीकरणका खेल
सत्ता समीकरणका खेल
निकै चर्को विवादमाझ नेपाली कांग्रेसले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भेटघाट र बैठक सुरु गर्न थालेको छ । तर, पनि सत्ता समीकरणका लागि भनेर गरिएका ती अभ्यास सफल हुन सकेका छैनन् । हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता चाहने तत्वले सरकार फेरबदल गरिरहन खोज्छन् । सरकार फेरबदलसँगै हुने राजनीतिक अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल पनि प्रशस्तै हुने गर्छन् । विगतमा नौ/नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा के कस्ता कर्तुत भए जगजाहेर नै छ । त्यसैले राजतनीतिक स्थिरताका लागि पनि सरकार फेरबदल गर्ने खेल बन्द गरिनुपर्छ ।
अहिले विशेषगरी माओवादी केन्द्र जसरी पनि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न चाहन्छ । तर, उसले चाहँदैमा सरकार परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’का रूपमा रहेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफैं पनि सरकार विस्थापन भइहाल्छ भन्ने विश्वासमा छैन । पार्टीभित्र विवाद र फरक मत छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि तयार देखिए पनि पार्टी सभापतिले अझै परिस्थिति परिपक्व भई नसकेको तथा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहनुपर्ने भएको कुरा राखिरहेकाले यसले सहकार्य गर्ने पार्टीबीच विश्वास जगाउन सकिरहेको छैन । तर, पनि देउवा सुस्त गतिका साथ यी कदम अघि बढाउन तयार देखिएका छन् । उनलाई सघाउँदै सहकार्य गर्ने हैसियतमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र पनि नयाँ समीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदम उचित रूपमा उठाएर तयार भइसकेका देखिँदैनन् । माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्म गरेको छैन । यसले नेपाली कांग्रेसमा अविश्वास जन्माएको छ ।
अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टी आफंैमा एकढिक्का छैन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओली सरकारसँग निरन्तर संवादमा छन् । अर्कोतिर उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई कांग्रेस, माओवादीलगायतका सरकारइतर शक्तिसँग मिलेर नयाँ वैकल्पिक सरकार निर्माणको तयारीमा देखिन्छन् । यसले संसद्मा अनौठो परिस्थिति सिर्जना हुन गएको छ । न त सरकारले आफूलाई विश्वासको मत लिन सक्ने न त सरकारइतर पार्टीहरूले सरकारको विकल्प नै दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ । यसैले गर्दा पनि संसद्भित्रको बिजनेस निकै गतिहीन र प्रभावविहीन बन्दै गइरहेको छ । संसद्मा संकट छ, सरकार देख्दा बहुमतको चलिरहेको छ तर यसमा संलग्न पार्टी र पक्षहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपयले कानुनी वा संवैधानिक रूपमा सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन नसके पनि सडकमा सरकारको राजीनामाको माग भने गरिरहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेस तयार नहुँदासम्म आफूहरूले समर्थन फिर्ता लिन गाह्रो भएको बताइरहेका छन् । सरकारको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गर्न नसकिने कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको अडान रहेको छ ।
संसद्मा ओली सरकार गिराउन अविश्वासको प्रस्ताव लगे पनि वा ओली सरकार टिकाउन प्रयास गरिए पनि संसद्मा ३४ सिट संख्या रहेको जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बनेको छ । यो पार्टीले ओली सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमा सहभागी भए सरकार गिर्दैन । यही पार्टी जसपाले सरकारइतरका शक्तिसँग मिलेर नयाँ विकल्प दिन चाहे पनि नयाँ सरकार बन्छ । यसमा अझ रोचक कुरा त के छ भने जनता समाजवादी पार्टी सिंगैमा सरकारइतर शक्तिमा सामेल भए नयाँ विकल्प दिन सकिन्छ भने यो पार्टीको आधा अर्थात् १७ सांसद्ले मात्र सरकारलाई समर्थन गरे ओलीसरकार पूर्ण कार्यकाल चल्छ । त्यसैले पनि यही सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णायक मत लिएर बसेको जनता समाजवादी पार्टीमाथि सबैको दबाब र प्रभाव बढिरहेको छ ।
९,१९६ कोरोनाभाइरस संक्रमित, ५० जनाकाे मृत्यु
काठमाडाैं । पछिल्लाे २४ घन्टामा नेपालमा ९,१९६ कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ५० जनाको मृत्यु भएको...
इटहरी प्रवेश गर्नेलाई सीमाबाटै फर्काइयो सुनसरीमा कडा बनाउदै लकडाउन
इटहरी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी ३१ गतेसम्म पूर्णरुपमा लकडाउन गरेपछि इटहरीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी...
असंगठित क्षेत्रका तीन मजदुरलाई राहत हस्तान्तरण
बागलुङ्ग । बागलुङ नगरपालिका बागलुङले असंगठित क्षेत्रका तीन मजदुरलाई राहत प्रदान गरेको छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन) को कारण दैनिक जीवन निर्वाहमा परेका तीन परिवारलाई...
सिरी ‘ए’ ६ सातामा सकाउने
खेल राजधानी समाचारदाता - June 3, 2020 0
रोम । कोरोना महामारीको त्रासपछि इटालियन सिरी ‘ए’को स्थगित खेलहरू आगमी जुन २० देखि पुनः सुचारु हुँदै छ । इटालियन फुटबल फेडेरेसन (एफआईजीसी)ले सोमबार...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - April 25, 2021 0
काठमाडाैं । सार्वजनिक भएको २४ घण्टामा गायक/सर्जक प्रकाश सपुतको गीत ‘मेरो पनि होइन र यो देश ?’ युट्युब ट्रेन्डिङको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।...
कला राजधानी समाचारदाता - April 14, 2021 0
केपी ओली इमान्दार तानाशाह : डा. बाबुराम भट्टराई
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - January 6, 2021 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इमान्दार तानाशाह भएकोे आरोप लगाएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले...
सिन्धुलीमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै बन्द
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - March 23, 2020 0
सिन्धुली । विश्वभर माहामारीको रुप लिईरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) प्रतिकार्यका लागि सिन्धुली ‘सेमी लक डाउन’ गरिएको छ । चैत ११ गतेदेखि अत्यावश्यक...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 6, 2020 0
काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसले स्वदेश आउन चाहने हरेक नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काँंग्रेसको केन्द्रीय जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागले...
कोरोना त्रास : उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा
Breaking News राजधानी समाचारदाता - August 20, 2020 0
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि आज बिहीबारबाट १० भदौसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएसँगै १० गतेसम्म बिनाकाम...
संघीय संसद्का अभिभारा र अक्कर
बिचार राजधानी समाचारदाता - February 23, 2020 0
भागवत खनाल पृष्ठभूमि : लर्ड ब्राइस भन्छन्, ‘लोकतन्त्र त्यस्तो पद्धति हो, जसमा शासकीय शक्ति कुनै एउटा विशेष व्यक्तिवर्गमा सीमित नभई समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिमा...
इलाममा भोलीबाट कोरोना भाईरस विरुद्धकाे खोप लगाइने
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - January 26, 2021 0
इलाम । इलाममा भोली (बुधबार) बाट कोरोना भाईरस विरुद्घको खोप सञ्चालन हुने भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा ल्याइएको खोप पहिलो चरणर्मो चिकित्सक तथा...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - January 25, 2021 0
तीव्र दौडधुपमा विपक्षी दल
महेश्वर गौतम - May 8, 2021
विजय ‘आकाश’ - May 9, 2021
सुभाष साह - May 4, 2021